Japanese man arrested for collecting saliva from schoolgirls
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိူမြို့ တွင် ကျောင်းသူလေးသုံးဦးအား တံတွေးထွေးခိုင်းပြီး ထိုဖြစ်စဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်
ကူးခဲ့ သည့် အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အလုပ်လက်မဲ့ ဂျပန်အမျိူးသားတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ 
တိုရှီဟီကိုမီဇူနို အားမသင့် မလျော်၊ မဖွယ်မရာပြုတတ်မှုဖြင့် တိုကျိူမြို့ တွင်အဖမ်းခံခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး ထိုပြစ်မှု
အတွက် ၎င်းအနေနှင့် ထောင်ဒါဏ် တစ်နှစ် သို့ မဟုတ် ဒါဏ်ငွေ ယန်း တစ်သန်း (ဒေါ်လာ ၁၂၄၀၀) ပေး
မီဇူနို ဟာ အသက် ၉ နှစ်မှ ၁၀ အတွင်းရှိမိန်းကလေးသုံးဦးကို လွန်ခဲ့ သည့် နှစ် အောက်တိုဘာလနှင့် ဒီဇင်
ဘာလများအတွင်း လမ်းများ၊ သို့ မဟုတ် တိုက်ခန်းအပြင်ဖက်များတွင် တစ်ဦးစီ ချဉ်းကပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၎င်း
အနေနှင့် တံတွေးများအား သုတေသနပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် ၎င်းအားသူမတို့ ရဲ့ တံတွေး
များပေးစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ တယ်လို့ မြို့ တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကဆိုပါတယ်...
သူများတွေ သွားရေကျတာကို သွားရေယိုတဲ့ သူကလည်းရှိသေးတယ်...
" ကလေးမလေးတွေ တံတွေးထွေးတာကို သူကဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ပါတယ်...သူက မိန်းက
လေးတွေကို ပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး အာခံတွင်းပိုင်းနှင့် လျှာများကိုလည်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ါသေးတယ်...
သူကထိုကိစ္စရပ်များကို သူ့ ရဲ့ ပုံမမှန်တဲ့ လိင်စိတ်အာသာဖြေဖို့ အတွက် ပြုလုပ်နေခဲ့ တတ်တာဖြစ်ပါတယ်.."
လို့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကဆိုပါတယ်...
မီဇူနိုဟာ ၁၇ နှစ်အတွင်း တိုကျိူမြို့ နှင့် ၎င်းမြို့ အနီးအနားရှိ ဆိုင်တမား အရပ်မှမိန်းကလေးငယ်ပေါင်း၄၀၀၀ ခန့် ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ ပြီး ထိုအထဲမှ အယောက် ၅၀၀ တို့ ရဲ့ တံတွေးများကို စုဆောင်းရယူခဲ့ တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ 
ထံမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီး သတင်းဌာနများကဖေါ်ပြခဲ့ ကြပါတယ်...
A 55-year-old jobless Japanese man has been arrested in Tokyo for having three schoolgirls spit out saliva and filming them in the process, police have said. Toshihiko Mizuno was caught in Tokyo on suspicion of "habitual indecency," which carriesapenalty of up to one year in jail orafine of one million yen ($12,400).
Mizuno separately approached the three girls, aged nine and 10, in October and December last year outside apartment towers or in the street, saying: "I am doing research on saliva. Give me your saliva,"aMetropolitan Police Department spokesman said.
"He videotaped them as they spat out saliva. He also asked them to open their mouths and filmed their mouth interiors and tongues," the official said. "He has done so habitually to satisfy his sexual desire."
Media reports, quoting police sources, said that Mizuno had approached about 4,000 young girls and managed to collect saliva from about 500 of them over 17 years in Tokyo and neighbouring Saitama.
Posted by peter kyaw | at 10:48 PM |
Labels: news: ndtv.com
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... မိတ်ဆွေကြီး ကိုမိုးအ...
Thai fined RM4,680 for running brothel 'camp'
German soldier finds 1m euros that fell off the ba...
British banking consultant retrains as witch docto...
Businessman hands out millions to the poor တရုတ် ...
How to SpotaLiarလိမ်တယ်၊ ညာတယ် လူညာကြီးတွေကို ဘ...
Japanese man arrested for collecting saliva from s...
Rare zonkey donkra zedonk type of thing born in Ch...
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် သက်ဝင်လှုပ်ရှားပုံရိပ်များ.... တု...
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... စိတ်လက်ပေါ့ ပါးစရာအင...
Man tries to escape from prison in suitcase
Canine on the front line: Stray dog who has become...
World's biggest natural boobs
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ..... လေဒီများရဲ့ ဦးနှော...